Didier Drogba oo sheegay in uu saga fariista guud ahaanba ciyaaraha kubada cagta – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsDidier Drogba oo sheegay in uu saga fariista guud ahaanba ciyaaraha kubada cagta
22/11/2018 B M Sports 0
Hiiraan Xog, Laacibkii kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa xaqiijiyay inuu isaga fariistay guud ahaan kubadda cagta, ka dib 20-sano oo uu cajiib ahayd.
Weeraryahankii qaranka Ivory Coast oo hadda 40-jir ah ayaa laba xilli oo kala duwan kusoo qaatay kooxda Chelsea, isagoo u dhaliyay 164 gool 381 ciyaarood oo uu garoonka u galay, waxaana uu sidoo kale kula guuleuystay afar horyaal oo Premier League-ga ah iyo tartanka Champions League-ga ee 2012.
Guushiisii ugu weyneyd ee uu Blues ka saacido waxa ay ahayd markii Finalka Champions League-ga ka qaadeen Bayern Munich sanaddii 2012, xilligaas oo uu dhaliyay rigooradii ay kooxdiisa ku qaadday tartanka.
18-kii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu ka tirsanaa kooxda ka dhisan Mareykanka ee Phoenix Rising oo ah koox uu milkiyaddeeda wax ka leeyahay.
Waxaa horraan la rajeynayay in Drogba uu fariisan doono horraantii bishan ka dib final-kii United Soccer League Cup, iyadoo ciyaartiisii ugu dambeysay ay kooxdiisa qasaaro 1-0 kala kullantay Louisville City kama dambeystii heerka labaad ee Mareykanka.
Balse weeraryahankan oo waayihiisa qaranka dhaliyay 65 gool ka dib 104 kullan, ayaa farriin aad u qiirro badan soo geliyay baraha bulshada isagoo xaqiijinayay ka fariisashada kubadda cagta.
“1989 ayay ahayd halka iyo xilliga ay wax walba kasoo billawdeen!!” ayuu Drogba ku billaabay qoraalkiisa.
“Marka aan ka fikiro 20-kii sano ee ugu dambeysay xirfaddeyda, ma ihi mid ku faani kara waxa aan gaarray ciyaaryahan ahaan, hase ahaatee, muhiimadda ugu weyn ayaa ah ina safarkani uu iga dhigay nin weyn.
AKHRISO:- Gudiga Doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo markale dib u dhigay doorashada madaxweynaha
Nin weerar ku qaaday dad Soomaali ah oo lagu xeray dalka Mareykenka